War Deg Deg ah:- Dagaal Caawa ka socda Duleedka Muqdisho iyo dhex bartamaha Muqdisho oo qaraxyo waawyn laga dhex maqlaayo hadda!! | kowtharmedia.com
Home WARAR War Deg Deg ah:- Dagaal Caawa ka socda Duleedka Muqdisho iyo dhex bartamaha Muqdisho oo qaraxyo waawyn laga dhex maqlaayo hadda!!
War Deg Deg ah:- Dagaal Caawa ka socda Duleedka Muqdisho iyo dhex bartamaha Muqdisho oo qaraxyo waawyn laga dhex maqlaayo hadda!!
Dadka Muqdisho ayaa Caawa waxay la kowsadeen Qaraxyo jug culus ah oo Xamar 4teeda gees laga maqlaayo iyo Xasan Sheeq oo Muqdisho kuhaayo warbeen ah iyo Hormar been Wabiga Shabeele biyahiisa Xerteen itoobiya. Xasan waxuu usheegay Xildhibaanada uu iibsayay in Beeraleyda Soomaaliyeed uu gaarsiiyay Hormar inkastoo iska in kiryay Abaaraha iyo Musiibada ka taagan Dalka Soomaaliya waxay Muqdisho Noqotay Meel halis ah.
Wararka laga helayo Degaanka Ceelasha Biyaha ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya inuu ka soconayo Caawa Dagaal Xoog leh oo u dhexeeya Ciidamada AMISOM iyo Al-shabaab.
Dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii Al-shabaab ay Weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin Ceelka Arbacow oo u dhaw Degaanka Ceelasha Biyaha,waxaana Dhaqawa Rasaasta laga Maqlayaa Meelo ka baxsan halka uu Dagaalku ka socdo.
Sidoo kale Dagaalka waxaa la sheegay in ay Barbar socdaan Madaafiic labada dhinac ay is weydaarsanayaan.
Khasaaraha ka dhashay Dagaalka ayaan la ogaan karin Xiliga oo ah Habeyn iyo Dagaalka oo weli soconaya.
Previous PostDadka Taagersan Xasan sidaan Ma wax qabadbaa mise waa Ducufnimo iyo meel kadhacii Baarlamaka Soomaaliya?? Next PostMusharrax Cadow Cali Gees”waa been Wararka sheegaya in aan ka Tanaasulay Musharraxnimada Xilka Madaxweyne”